बजेट प्रतिको अपेक्षा र हालसम्मको कार्यान्वानको अवस्था::न्युज बिहानी
बजेट प्रतिको अपेक्षा र हालसम्मको कार्यान्वानको अवस्था
गरिबलाई घर, बेरोजगारलाई स्वरोगार मुलक कार्यक्रममा समाबेश
लाल बहादुर वि.क.
मंगलबार देशमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघिय सरकारको पहिलो बजेट संसमा प्रस्तुत गरे । बजेट विनियोजनको नयाँ ढाँचा देखीएको छ । सरकारले कृषि, जिद्युत र पर्यटनमा बजेट बढाएको छ । सुरुवातिको संकेतले जनताका सपनालाई अंगालेको छ । हरे वर्ष यसै गरि बजेट प्रस्तुत हुँदै आएको छ । बजेटको यहि निरन्तरता २०४८ सालदेखी नै रहेका पाईन्छ । तर यो वर्ष अन्य वर्ष भन्दा अलि फरक ढाँचाका साथ बजेट पारित गरिएको छ ।
गरिबलाई घर, बेरोजगारलाई स्वरोगार मुलक कार्यक्रममा समाबेश गर्ने गरि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था पनि तत्काल लागु हुने गरेर सरकारले ल्याएको छ । यसमा कति कार्यान्वयान हुन्छ भन्ने अरेकको चासोको विषय बनेको छ । अधिकांसले हरेक वर्ष झै यो वर्षपनि बजेट भाषणकमा मात्र सिमित रहने सम्भावना रहेको आकलन समेत गरेका छन् । यो प्रश्न उब्जस्नु स्वाभाविक पनि हो अहिले सम्म जुन सुकै सरकार आएको भएपनि बजेट भाषण बाहेकका कामहरु गरेको छैन् ।
नेपालले भारत बाट नै अधिकांस विद्युत किनेर चलाउदै आएको छ । तर, सरकारले तिन वर्षमा नेपालबाट लोसेडिङ हटाउने ५ वर्षमा चाहे जति विद्युत उपलब्ध गराउने गरेर नयाँ कार्ययोजना बनाएको छ । जस्तो हवाइ क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुँदाखेरि अथवा हाइड्रो पावरमा, बैंकिङ क्षेत्रमा निजी पूँजीको संलग्नता खुला गरिदिएपछि जस्तोसुकै परिस्थीतिमा पनि नेपालले आफ्नो देशलाई अध्यारोमा राख्ने छैन् ।
जनचासोहरु पनि उत्तिकै छन । सबैको ध्यान बजेटले सामाजिक क्षेत्रलाई बढी जसरी अंगालेको छ के त्यसै गरि कायान्वायन हुन्छ त ? यसपटक देशले आर्थिक क्षेत्रमा स्थान पाउनै पर्छ । सबैको यो सकारात्मक सोच हो सरकारले सामाजिक क्षेत्रलाई बढी ध्यान दिनु ठुलो कुरा हाईन जरी देशमा दुई पतिहाईको सरकार बनेको बजेटलाई त्यसैगरि काममा खर्चिन सक्न पर्ने बाध्यात्मक परिस्थीती पनि यो बेला सरकारलाई चुनौतिको रुपमा खडा भएको छ ।
सरकारले प्रत्यक समय बढाउने बृद्ध भत्ताको कारण पनि विभिन्न समयमा आलोचनाहरु ख्ेप्नु परेको छ । अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । सरकारले कर्मचारीहरुको तलब बढायन बरु भत्ता बढायो । प्रतिपक्षि दलहरुले कम्युनिष्ट सरकारले भत्ता बाहेक अरु केहि बढाउलैन भनेर भाँजो हाल्न बेर लाउदैनन् ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्दयले पहिले देखी नै सरकारी लगानी बढाउन भन्ने हल्लाले खुबै बजार ततायो । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी लगानी यथावत छ । दैनीक श्रपमा जनताहरु उनीहरुबाट ठगीदै आएका विभिन्न घटनाले विभिन्ने समयमा खुबै बजार तताउछन् । तर, अहिले पनि सरकार जाँड(बिँडी, बोका बेच्ने दायित्वबाट पन्छिएको छैन । त्यो त निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने सामान्य काम हो यस्ता कामहरुमा सरकार् अल्झियर बस्नु त्यति उचित हुँदैन । त्यो काम सरकारले अहिले पनि गर्ने स्थिति देखीन्छ ।
तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टिका चुनावि एजेण्डा र कार्यान्वायनको स्थीति
तत्कालीन एमाले(माओवादी चुनावको घोषणापत्रअनुसार चुनावि एजेण्डाहरु अहिले पनि उत्कृष्ट देखीन्छन् । यदि सरकारले गर्न चाहेका खण्डमा ति एजेण्डाहर सम्भव पनि छन् । तर आफै सरकारले कन्छुसाई गरेकोले मात्र पछि परेको पाईन्छ । जस्तो काठमाडौं – हेटौंडा – वीरगञ्ज फास्टट्र्याक र रेल रोड ट्वीन बनाउने जस्ता योजनाहरुलाई यथास्थीतीमै टन् । जसले सरकारको लगानी १० वर्षमा उठाउन सक्छन् ।
यहाँ स्वाभिमानको कुराहरु गरेर रमजनीतिक दलहरुले स्वार्थका लागि मात्र काम गरिरहेका छन् । नेपालको जलस्रोतको फाईदा हामी नेपालीले उठाउन पथ्र्यो अहलिे सम्म यसको लागी सिन्को समेत भाँचिएको पाईद्यैन् । उता भारतले सुको पैसा खर्च नगरी आफैले भारतको स्वार्थ पूरा गरिदिने गरी वाटर प्राउन एरिया (बढी पानी भएकोबाट कम हुने एरियामा नदीको पानी वितरण गर्ने योजना)लाई नेपालको मात्रै बजेटबाट परिपूर्ति गर्ने गरी योजना अगाडि ल्यायो । उदाहरुको लागी यस्ता थुप्रै आयोजनाहरु छन् । जस्तो सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सुनकोशी कमला डाइभर्सन, कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सनको काम जारी छ । सबै नेपालको सम्पतिका मुख्य स्रोतहरु हुन ।
त्यसैले जनताले ईच्छाएका अहिले सम्मकै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केहि गर्छन भन्ने आशमा जनतामा पलाएको पाईन्छ । यो आसालाई सरकारले निराशामा जुन दिन परिवर्तन गर्छन त्यो दिनबाट नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार बन्न गाह्रो बन्ने स्थीतिको सिर्जना नहाला भन्न सकिदैन् । सर्वसाधारणले जुन दिनदेखी देशका ठुाल दुई कम्यसनिष्टहरु एक बने त्यहि दिन देखी नै सामाजिक तथा राजनीतिक हिसाबले नेपाललाई समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न थालेका छन् । यसैले बजेटलाई भाषणमा मात्र नभयर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । तब मात्र निकट भविष्यमै जुन समस्या नेपाली अर्थतन्त्रमा आउनेवाला छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिने छ ।
ओलीलाई सुनाईदिनू – पहिले पैसा कमाउनू, पैसा कमाउने ठाउँ बनाउनू
“लक्ष्मी को पुजा गर ,तर उनको अस्मिता लुट्ने प्रयस नगर “
नेपालमा जलविद्युत विकासका चुनौती र झट्काहरू